Raila Odinga oo ka hadhay tartanka doorashada Kenya
Hoggaamiyaha mucaaradka ee Kenya Raila Odinga ayaa sheegay isaga iyo ku xigeenkiisa Kalonzo Musioka ay ka hadheen tartanka doorashada ee dhammaadkan bishan. Waxaana uu sabab uga dhigay ka hadhidiisa in aan dalabaadkoodii la aqbalin ka dib go’aankii maxkamadda ee ay ku laashay doorashadii bishii August.
Isbahaysiga Mucaaradka ee Kenya ayaa dalbaday in qaar ka mid ah xubnaha guddiga doorashada la bedelo. Raila Odinga ayaa sheegay in “go’aankoodu uu ahaa in doorashada ku celiska ah lagu qabto hannaanka ay maxkamadda amartay, kaas oo uu dhigayo dastuurka”.
Qoraal ay soo saareen hoggaamiyayaasha mucaaradka waxay ku sheegeen in “IEBC ay si ula kac ah uga hor timi isbedelka muhiimka ah si loo xaqiijiyo in doorashada 26-ka bishan u noqoto mid xor iyo xalaal ah”. Waxaanay guddiga ku eedeeyeen in ay yihiin meel ay maamulaan xisbiga talada haya ee Jubilee.
“Doorashada keli ah ee Jubilee ay aqbalayaan waa mid ay ayagu ku guuleystaan,” ayuu Raila sheegay warbaahintii kula hadashay xafiiskiisa. Waxay guddiga ugu baaqeen in uu joojiyo hannaanka qabashada doorasho ku celis ah, ayna billaabaan hannaan cusub oo doorasho lagu qabto. Raila waxa uu yidhi “Waxaa cad in is bedelka uu yahay mid wax looga qabanayo qaladaadkii ka dhacay doorashii horraantii August. Waxaa taas sabab u ah in la adeegsanayo in markale doorashada soo socoto lagu shubto,”. “Is bedel la’aan doorasho ma dhacayso,” ayuu yidhi. Waxay ku dhawaaqeen debed baxyo ballaadhan oo berri ka dhici doono Kenya oo dhan oo ay ku dalbanayaan is bedel lagu sameeyo hannaanka iyo guddiga doorashada.